အိုမီခရွန်ကို ကာကွယ်ရန် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြရန် တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ပြည်သူများအနေဖြင့် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရန် COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံကြရန် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း လူဦးရေ ၁၃.၈၆ သန်းရှိသော ထျန်းကျင်းမြို့တွင် COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း ၁၃၇ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက်သူများအားလုံးမှာ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထားခဲ့သည်။
အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် သန္ဓေပြောင်းပရိုတိန်းမြောက်များစွာ သယ်ဆောင်ထားပြီး ကာကွယ်ဆေး ကိုယ်ခံအား လွန်မြောက်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ (China CDC) မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကံအားလျော်စွာပင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူများ သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရသူများသည် ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် ကာကွယ်ရေး ဒုတိယလိုင်းအဖြစ် T cells လုံလောက်စွာရှိကြောင်း လေ့လာမှုအချို့က တွေ့ရှိထားကြောင်း သိရသည်။
ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းများသည် COVID-19 အတွက် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးနှံပြီးနောက် လျင်မြန်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး အဆင့်မြင့်မားစွာ ထိန်းထားနိုင်ကြောင်း။ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် ကာကွယ်ဆေးထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
အိုမီခရွန် ဗိုင်းရပ်စ်သည် အဆုတ်များထက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အပေါ်ပိုင်းကို တိုက်ခိုက်ပြီး ယခင်ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်များထက် ရောဂါလက္ခဏာပျော့ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများက ဖော်ပြထားသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းကို တုပ်ကွေးဖျားနာမှုများကဲ့သို့ မမှတ်ယူသင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အိုမီခရွန်သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ ကိုယ်ခံအား လုံလုံလောက်လောက် ကြံ့ခိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များ ကောင်းမွန်စွာမရရှိပါက “ကူးစက်ခံရမည်” ဖြစ်ကြောင်း ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် ဟွာဆန်းဆေးရုံ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Zhang Wenhong က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံရန်၊ ကာကွယ်ဆေးများသည် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါလက္ခဏာများ ပြင်းထန်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း Zhang က တိုက်တွန်းပြောခဲ့သည်။
ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်သည့်အတွက်ကြောင့် အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ် တည်ရှိရန် စိန်ခေါ်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပျံ့နှံ့ရန်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း China CDC ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Wu Zunyou က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသော်လည်း ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မူ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်က အခြားသော ဗီဇမျိုးကွဲများထက် ကာကွယ်ဆေးအာနိသင် ထိရောက်မှုလျော့နည်းစေသဖြင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းကို အလွန်ပင်ထောက်ခံအကြံပြုကြောင်း Wu က ပြောခဲ့သည်။
ထျန်းကျင်းမြို့တွင် ကနဦးအတည်ပြုလူနာများစွာသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအားနည်းပြီး ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၌ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသည့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအကယ်ဒမီမှ ပညာရှင် Zhang Boli က ပြောခဲ့သည်။
ဒေသတွင်းကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆောင်းရာသီ အားလပ်ရက်များ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သဖြင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအား ရှောင်ရှားကြရန် Zhang က အကြံပြုထားသည်။
နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်းသည် အိုမီခရွန်အပါအဝင် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ခြင်းကို တားဆီးရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း CDC ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မကြာခဏလက်ဆေးခြင်း၊ နေအိမ်အတွင်း လေသန့်စင်ခြင်းကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးများတွင် ပြင်ပရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို “ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောပစ္စည်း ခြောက်မျိုး” အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲထားပြီး ၎င်းတို့မှာ လေ၊ အအေး၊ နွေအပူ၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် မီး တို့ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဝူဟန့်မြို့တွင် ရောဂါဖြစ်စဉ်၌ သုံးသပ်ကြည့်ပါက ယင်းမြို့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလက ၁၆ ရက်နီးပါး မိုးဖွဲဖွဲရွာခဲ့သဖြင့် အေး၍စိုစွတ်သော ဖျားနာမှုအဖြစ် မှတ်ယူထားကြောင်း သိရသည်။
နာမည်ကျော် တရုတ် ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေး (TCM) ပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သူ Zhang က ထျန်းကျင်းမြို့၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည် လေတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အေးခြင်းတို့က အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် TCM ဆေးကုသမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စိစစ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရာသီအလိုက်အကြောင်းရင်းများနှင့် ငယ်ရွယ်သောလူနာများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်း ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် လူနာများအား အထူးသဖြင့် TCM နှင့် အနောက်တိုင်းဆေးဝါးများ ပေါင်းစပ်ကာ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပံ့ပိုးပေးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း Zhang က ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan. 12 (Xinhua) — Chinese health experts have urged the public to getabooster shot for COVID-19 to protect against the Omicron variant.
As of2p.m. Wednesday,atotal of 137 people had tested positive for COVID-19 in north China’s Tianjin,amunicipality of 13.86 million people that neighbors Beijing, with all the cases confirmed as the Omicron variant.
Experts from the Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) told Xinhua that the Omicron variant carries many spike protein mutations, which may enhance its ability to escape vaccine immunity.
Fortunately, some studies have found that people who were vaccinated or infected within the past six months have enough T cells asasecond line of defense for the immune system to protect them from developing severe symptoms.
The experts said antibodies can increase rapidly and maintain high levels after people getabooster shot for COVID-19. As the Omicron variant can make the vaccine less effective, it is particularly necessary for people to getabooster shot.
Evidence has been emerging that Omicron affects the upper respiratory tract more than the lungs, causing milder symptoms than previous variants. The World Health Organization said on Tuesday however that it should not yet be seen asaflu-like illness.
Zhang Wenhong, head of the Center for Infectious Diseases with the Shanghai-based Huashan Hospital of Fudan University, said Omicron “will bite” if one’s immunity is not strong enough and there are no good medical resources available.
Zhang encouraged the public to get fully vaccinated, noting that vaccines can still protect from severe symptoms caused by the Omicron variant.
Wu Zunyou, chief epidemiologist with the China CDC, said that due to the milder symptoms it causes, it is more challenging to locate Omicron and easier for the variant to spread. It might be relatively good news for individuals, but it isachallenge for prevention and control onawider scale.
Wu saidabooster jab is highly recommended as the variant makes the vaccines less effective than against other variants.
Zhang Boli, an academician with the Chinese Academy of Engineering, said many of the initial confirmed cases in Tianjin are primary and secondary school students who are less vaccinated and become weak links in epidemic prevention and control efforts.
Zhang suggested that local students avoid public events as the winter holiday approaches.
CDC experts noted that wearingamask is still an effective way to block the spread of the virus, including Omicron. Meanwhile, they also suggest washing hands frequently, maintaining good indoor ventilation, and keeping an eye on one’s health situation.
In traditional Chinese medicine, external causes ofadisease are classified as “the six pathogenic factors,” namely wind, cold, summer heat, dampness, dryness and fire. For instance, the outbreak in Wuhan in central China was viewed asacold and dampness illness as the city had been drizzling for almost 16 days running in January 2020.
Zhang, alsoarenowned Traditional Chinese Medicine (TCM) expert, said the outbreak in Tianjin was fueled by wind and cold. He noted they had revised the TCM treatment and rehabilitation plan, taking into account seasonal factors and young patients’ physical characteristics.
Zhang said they have been trying to provide the best medical care to patients, especially children, by combining TCM and Western medicine. ■
Photo : A parent holdsachild for nucleic acid test atatesting site ofaresidential area in Siqing District in north China’s Tianjin, Jan. 9, 2022. (Xinhua/Li Ran)